आज विनायक चतुर्थी : महत्व र कथासहित
गणेश पुराणका अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेशका लागि समर्पित छ । हरेक महिना २ वटा चुतर्थी तिथि आउँछन्, एउटा कृष्णपक्षमा र अर्को शुक्लपक्षमा । कृष्णपक्षको चतुर्थीलाई संकष्टि चतुर्थी भनिन्छ भने शुक्ल पक्षको चतुर्थीलाई विनायक चतुर्थी भनिन्छ । यस वर्ष पुस महिनाको विनायक चतुर्थी पुस १४ गते सोमबार परेको छ । यस दिन मनोकामना पूरा गर्नका लागि गणेश भगवानको पूजा गरेर ब्रतसमेत बस्ने प्रचलन छ । पूजा कसरी गर्ने ?बिहान चाँडै… पुरा पढौ
नेपाल दशनामी युवा समिति अध्यक्षमा प्रेम गिरी
नेपाल दशनामी युवा समिति कास्कीको प्रथम अधिबेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार पोखराको न्यु एरा रेष्टुरेण्ट एन्ड पार्टी प्यलेसमा सम्पन्न अधिवेशनले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ५, रिभानका प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतरुपमा जिल्ला कार्यसमिति चयन भएको हो । अधिवेशनले उपाध्यक्षमा राजु गिरी, महिला उपाध्यक्षमा मोनालिषा गिरी, सचिवमा आशिष पुरी, कोषाध्यक्षमा सरस्वती पुरी, सहसचिवमा सुस्मिता गिरी चयन भएका छन् । त्यसैगरि सदस्यमा सिता गिरी, ऋषिराम गिरी, मनिषा गिरी, अन्जली गिरी, सुष्मा गिरी र निश्चल गिरी… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष १३ गते आइतबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष १३ गते आइतबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २९ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषशुक्लपक्षको तृतीय तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज रेवती नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा हर्षणक, करणमा गर रहनेछ भने आनन्दादि योगमा गद रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष १२ गते शनिबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष १२ गते शनिबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २८ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषशुक्लपक्षको द्धितीय तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज उत्तरषाढा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा व्यतिपात, करणमा कौलव रहनेछ भने आनन्दादि योगमा राक्षश रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष ११ गते शुक्रबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ११ गते शुक्रबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २७ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषशुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज पूर्वाषाढा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा ध्रुव, करणमा बब रहनेछ भने आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
सूर्यग्रहण शुरु, शताब्दीकै ठूलो !
सन् २०१९ को अन्तिम सूर्यग्रहण शुरु भएको छ र अहिले जारी छ । नेपाली समय अनुसार यो ग्रहण ८ बजेर ४२ मिनेटमा देखिने खगोल शास्त्रीहरुले बताएका छन् । सो ग्रहण ११ बजेर ३१ मिनेटमा समापन हुनेछ । प्लेनेटरी सोसाइटी अफ इन्डियाका निर्देशक रघुनन्दनले बीबीसीलाई जनाएअनुसार एक दशकमा पर्ने ४–५ सूर्य ग्रहणको तुलनामा आजको सूर्यग्रहण सबैभन्दा बढी देखिनेछ । यसै आधारमा यो सूर्यग्रहणलाई शताब्दिकै सबैभन्दा ठूलो सूर्यग्रहण भनिदै छ । हुनत हरेक वर्ष… पुरा पढौ
ग्रहण लागेका बेला के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ?
पुस १० गते बिहीवार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाली समय अनुसार बिहान ८ बजेर ४२ मिनेट देखि ११ बजेर ३१ मिनेटसम्म सुर्य ग्रहण लाग्नेछ । सूर्य ग्रहणका बेला चन्द्रमा अस्त हुने साथै बुध, वृहस्पति र शनि पनि अस्त रहने छ । सुर्य ग्रहणका बेला सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शनि र केतु धनु राशिमा एकसाथ रहने छन् । जसले गर्दा केही अप्रत्यासित घटनाक्रम बढाउन सक्ने, रोगको संक्रमण बढ्न… पुरा पढौ
सूर्यग्रहण : कुन ठाँउमा कति बजे सुरु हुदैछ ?
बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिले नेपालका तीन स्थानबाट देखिने खण्डग्रास सूर्यग्रहणसम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँ, महेन्द्रनगर र भद्रपुरबाट देखिने सूर्यग्रहणको वैज्ञानिक रुपमा गणितीय गणनाअनुरुप शुद्ध तथ्याङ्क निकाली जनमानसमा जानकारी गराएको हो ।जसअनुसार काठमाडौँमा ०८:४३, महेन्द्रनगरमा ०८:३८ र भद्रपुरमा ०८:४८ मा ग्रहण शुरु हुनेछ । यसैगरी ग्रहणको मध्य पनि काठमाडौँमा १०:०१, महेन्द्रनगरमा ०९:५२ र भद्रपुरमा ०९:५९ मा हुनेछ । ग्रहणको अन्त्य काठमाडौँमा ११:३३,… पुरा पढौ
पौषकृष्ण आमावश्याका अवसरमा तीर्थ श्राद्ध गरिंदै
वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले पौषकृष्ण आमावश्याका अवसरमा बुधबार विभिन्न तीर्थस्थलमा विधिपूर्वक तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरी दिवङ्गत पितृप्रति सम्मानभाव प्रकट गर्दैछन् । पौषकृष्ण आमावश्याका दिन तीर्थमा श्राद्ध गर्ने शास्त्रीय विधान रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । तीर्थ श्राद्ध पनि सोह्रश्राद्धमा गरेजस्तै पार्वण विधिले गर्नुपर्ने धार्मिक विधान छ । यसवर्ष बुधबार र बिहीबार दुई दिन अमावास्या अर्थात् औँसी तिथि परेको छ । बिहीबार… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष ९ गते बुधबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ९ गते बुधबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २५ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको चतुर्दशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज ज्येष्ठा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा गण्ड, करणमा शकुनि रहनेछ भने आनन्दादि योगमा ध्वांक्ष रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ